ရွေးချယ်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Ideas & Plans » ရွေးချယ်ပွဲ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)	6
Posted by အရင့်ရောင် on Jul 12, 2012 in Ideas & Plans |6comments
ဇနီး အလှလေးအတွက် မျှော် မှန်းရည်
ရွှေတွေ ၊ ငွေတွေ စုထားသည်
ခန်းဝင် ပစ္စည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
အားလုံး အဆင်သင့် ရှိပါသည်…………….
မောင့်လိုလူပျိုချော နဲ့ ဖူးစာ ဆုံသူကံကောင်းမည်
စည်းကမ်းများတော့ သတ်မှတ် ရမည်။
မိန်းမသား ချင်း အတင်းဟြေတာ ဆင်ခြင်ရမည်။
မခြွေမတာ အသုံးအစွဲနဲ့ ငွေ ဖြုန်းတီးတာ ချိုးခြံပါအတည်
အိမ်ရှင် မလေး တစ်ယောက်အဖြစ် ယုယုယယ နေလျှင် ကျေနပ်ပြီ
မောင် နဲ့ ဖူးစာ ဆုံချင်သလားလို့ မေးမည် မေးမည် အပျိုတွေ ၀ိုင်းလာပြီ။။။…
Khaing Khaing says: အမလေးဟယ် ကြီးကျယ်တာ တော်ပီအေ ဒီလိုလူမျိုးစောရီး ညည်းစာရင်းကနေငါ့ကိုထုတ် ငါကတော့ အတင်းတုတ်မှာပဲ ……..
အရင့်ရောင် says: အတင်းတော့တုပ်နဲ့လေဂျာ…………….
shwe kyi says: ကိုအရင့် အပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ အဆုံးသတ်ကိုစောင့်နေတာ။ ကိုအရင့်ရေ လျှောက်လွှာလက်ခံဖို့စာရေးမလိုရင်ပြောဦး။
အရင့်ရောင် says: စာရေးမ ထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတာကို ခပ်အပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါဂျောင်း………..
အရင့်ရောင် says: ဒီလိုမှ မရွေးချယ်ရင် မရတော့ဘူးဗျ………..
ဘဲဥ says: နှာဘူးဂျီး တိုတိုရင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Ei Kyipyar - ခင် ခမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - ခင် ခ - အလင်း ဆက်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - ခင် ခ - Ma Eiရွာသူ/သားများ အတွက် -etone - ရဲစည်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ခင် ခ - အရီးခင်လတ်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ -etone - awra-cho“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ခင် ခ - ko pauk mandalayဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - ခင် ခ -etone“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” -etoneအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ -etoneအတု - kyeemite - Munetezမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - may july - အလင်း ဆက်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Foreign Residentအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - may july - ရဲစည်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကထူးဆန်း - Ei Kyipyarသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67423 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59135 Kyats )MaMa (57995 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...